တှုနှု့ဖိနှု့မါထီဥပှုန့ဥမှု့ဝဲပှါ်ကညီအန့ဆ့ဥ Lk 20:27-40 (၂၁.၁၁.၂၀၂၀) | Radio Veritas Asia
တှုနှု့ဖိနှု့မါထီဥပှုန့ဥမှု့ဝဲပှါ်ကညီအန့ဆ့ဥ Lk 20:27-40 (၂၁.၁၁.၂၀၂၀)
တှုနှု့ဖိနှု့မါထီဥပှုန့ဥမှု့ဝဲပှါ်ကညီအန့ဆ့ဥတခါလီါ်. Lk 20:27-40 (၂၁ယ၁၁ယ၂၀၂၀ )
ပကဲပှါ်ကညီပလှုလှု န့ဆ့ဥ မှု့ဝဲ တှုထီဥပှုဆီဟံဥဆီဃီလ့ ဒီးဒုးအါထီဥချံသဥ စ့ါ်သွဲဥသှု့တဖဥန့ဥလီါ်.
ပှါ်ကဲထီဥတှုအဲဥတီဘဥဆဥခီဖျိလ့ ပှါ်ကလုဏယ တှုကတိါ်ကျိဏတှုဘူဥတှုဘါ တှုစှူုတှုနဏ တဒံးသိးအဃိ သးတလီါ်ပလိဏလိဏအသးလ့ ကတ့ကဖျီအသးဘဥန့ဥလီါ်. အ၀ဲသ့ဥ တ့ဖျီဃုဏဒီး ပှါ်ကလုဏဒံးသိးယ တှုကတိါ်ကျိဏဒံးသိး တှုဘူဥတှုဘါဒံးသိး တှုစှူုတှုနဏဒံးသိးတဖဥန့ဥလီါ်. တှုသ့ဥတဖဥအါံ် ကဲထီဥအသးဖဲ ပအိဥဖဲဟီဥခိဥ ဒ်န့ဆ့အလုအလှုအသိးန့ဥလီါ်.
We are the children of the living God. The resurrection. တှုမူန့ဥမှု့ပဎွါ်လီါ်. အဃိတှုသံန့ဥနမှု့တှုကတှု့ဘဥ. တှုမူထူဎိဏန့ဥပကဘဥတုါ်လီါ်. ဖဲန့ဥအခါ တှုခဲလ့ဏ ကလ့ပှဲါ်ဝဲလီါ်. ပတှုအိဥမူန့ဥ ပမ်ါဘဥထွဲအီါ် ထဲဟီဥခိဥအါံ်တခါလီါ်ဧါ. မ့တမှု့ ဒီးမူခိဥဧါ. ပှါ်တနီါ်နီါ် န့ဆ့ဥအမဲဏချံလ့အိဥဒီး အီါ်န့ဥထံဥဒဥတှုဖဲ ဟီဥခိဥတခါဧိါ်အါံ်လီါ်. လ့ပှါ်သ့ဥတဖဥအါံ် အကျါန့ဥပပဏဃုဏဧါ.
ပတှုဘူဥတှုဘါ ပတှုစှူုတှုနဏအတှုပညိဥအကတှု့ မှု့အိဥဒဥဖဲဟီဥခါအါံ်လီန့ဥ If we do not recognize spiritual realities. Resurrection is meaningless for us.
ကစှုခရံဏတဲပှါ်လီါ်တှုံ လ့အ၀ဲမှု့တှုဂဲါ်ဆ့ထ့ဥသမူထီဥက့ါ် မှု့နနဏဎါ်ဧါ - ဎိါ်ဟဥ ၁၁း၂၅. ပ၀ဲခဲအါံ်စှု့ကိးပကစံးဆ့ တှုသံကွှုအ၀ဲအါံ်.
Jesus came to restore Paradise and everlasting life for us.ပအိဥမူခဲအါံ် ပမှုလှုဒီးသးခုစှု့ကိးလ့ တှုအိဥမူလ့ကဟဲတှုမူလီါ်စိါ်န့ဥဧါ.
The glorious age to come is nothing like this present age.
တှုအိဥမူလ့အပှဲါ်ဒီးတှုလ်ါကပီါ် လ့ကဟဲန့ဥတမှု့တှုဒံးသိးဒီး တှုအိဥမူလ့ ပအိဥဖဲဟီဥခိဥတစိါ်အါံ်ဘဥ. ပတဘဥထိဥသတြီါ်စှု့ကိးဒီး ပတှုအိဥမူခဲအါံ်န့ဥဘဥ. ပတှုပညိဥ ပတှုမံမှီုမှု့လီါ်ဒးအိဥဒဥဖဲ ဟီဥခိဥအါံ်န့ဥမူခိဥတှုနှု့သါ တှုဂဲါ်ဆ့ထ့ဥသမူထီဥက့ါ်န့ဥကဎါံ်ဒီးပှါ် န့ဥလီါ်.
လူကဥ ၂၀း ၃၅ - ၃၆ မ့မှု့ပှါ်လ့ တှုပဏအီါ်လ့ပှါ်ဂ့ါ်န့ဥ နှု့ဘဥခဲကိဏတဃဏယ ဒီးပှါ်လ့ အနှု့ဘဥတှုဂဲးဆ့ထ့ဥ သမူထီဥက့ါ်တဖဥန့ဥတနှု့မါနှု့ဝ်ါဘဥလီါ်. သံတသ့လ့ါ်ဘဥ. ဒ်သိးမူခိဥကလူးတဖဥယ မှု့တှုဂဲါ် ဆ့ထ့ဥက့ါ်အဖိအလါံ် ဒီါ်မှု့ဎွါ်အဖိလီါ်.